Remangwana Rekufamba | Save A Train
musha > Travel Europe > Remangwana Rekufamba
kubudikidza Ilan Kaps
kutakura, muchimiro chose, ndiyo musana wepanyika chero ipi nehupfumi hwayo. Yaingova nzira chete, njanji, uye nemweya iwo watakakwanisa kubatanidza nyika nenzira iyo yakazova diki kwazvo kupfuura zvairi chaizvo. saka, kana tikatarisa maindasitiri makuru pasirese nyika, kufambisa ndeimwe yeanoshanda kwazvo, zvinogara zvichichinja kuti zvive zvakanaka mune ramangwana redu.
Mafambiro achangobva kuitika muindasitiri yekufambisa uye yekufambisa ave mukugadzira zvakasvibirira zvisarudzo. Kufambisa-kunodiwa kuti uchengetedze nharaunda yedu, zviitiko zvitsva mukufambisa ndizvo zvatova kushanda pachinhu ichi. zvisinei, uku kufambira mberi kuri kutyora zvakare miganhu yemafambiro atakafamba kwezana remakore rapfuura. Uye nekuita izvi, vari kutiendesa kune ramangwana rekufamba iro richikurumidza, ngozi, uye chaizvo kunze kwenyika.
Remangwana Rekufamba: Space Tourism
Space yave iri mugumo wevanhu pakupedzisira kwenguva yakareba. zvisinei, kubva patakadzika tsoka pamwedzi makumi emakore apfuura, hapasati paine chero chinhu chakakosha kufadza vanhuwo zvavo. Zvisinei hazvo, kune nhangemutange inoenderera yekutora vanhu kuenda muchadenga, zororo. Space Tourism ndiyo inotevera chinhu chakakura, uye kunyange zvingave zvinodhura uye zvakasarudzika, inhanho huru kune ramangwana, izvo zvinosanganisira mukana colonizing Mars kana kugadzira inogara nzvimbo nzvimbo dzinowanikwa mazana emazana anogona kugara pamwechete. zvisinei, nepo masayendisiti anogona kunge akatora danho munzira kwayo, isu tingafanira kumirira kwezvizvarwa zvakati.
Kufamba Uye Kufambisa Indasitiri: Ngoro Dzisina kutya
Bvunza chero munhu nezve zano ravo rekufambisa mune ramangwana, uye ivo vanopfuura vangangodudza mota dzisina driver. Patova nezvitima zvakatenderedza pasirese zvinoshanda pane izvi musimboti. Uyezve, kwenguva refu kwazvo, masayendisiti uye vatungamiriri vemaindasitiri vanga vachishanda kuitira kuti nzira dzive dzakachengeteka nekusanganisa tekinoroji mune yedu yezuva nezuva chiitiko chekutyaira. Chii chinoita kuti mota dzisina mutyairi dzimirire ndeyekuti ichagadzirisa zvachose indasitiri nenzira dzakawanda. Kubva pakuva zvakawanda zvakatipoteredza ushamwari kuchengeteka kwemumugwagwa, vanhu vachakwanisa kuvhara marefu akareba pasina kunetseka kwekutyaira kwemaawa.
Amsterdam kune Paris matikiti
London kuenda kumatiketi eParis
Rotterdam kuenda kuParis matiketi
Brussels kuenda kumatikiti eParis
Remangwana Rekufamba: zvitima
Imwe yevekare mafomu ezvekutakura vanhu kumativi, zvitima zvichine nzvimbo zvakajeka mune yedu ramangwana. Zvinoshamisa, pamwe kupfuura kare. Kunyangwe seari matekiniki matsva akagadzirwa kuita kuti masitima enjanji akachengeteke, nekukurumidza, uye zvakanyanya nyore, kukosha kwakakosha kwehurongwa hwakadaro kuchawedzera zvakanyanya. Zvitima zvatova chimwe chinhu chakaenzana munharaunda sezvo vapfumi kwazvo kazhinji vanokwira padivi pevarombo veboka rinoshanda asi nekuda kwekukwira kukurumidza kwevanhu, kunyanya munyika dzakasimukira, inoshanda uye yakachipa masitimu masisitimu ichave yakakosha pakurwisa kutenderera kwemotokari. Izvi zvakare zvichave kukanganisa kwakanyanya munharaunda sezvo zvitima zvichakwanisa kumhanya zvakanyatsoshanda pakachena simba nepo panguva imwecheteyo zvisingaverengeki gasi-rinorema mota kubva mumugwagwa uye kudzikisa pasi CO2 mweya.
Munich kuenda kuZurich matikiti
Berlin kuenda kuZurich matiketi
Basel kuenda kuZurich matikiti
Vienna kuenda kuZurich matiketi
Hyperloop iri kurondedzerwa se "yekutanga nzira huru yekufambisa mukati 100 makore. ” Izvo zvinosanganisira kufamba nekumhanya kwepamusoro mukati mehubhu, kubatanidza imwe kuenda neimwe. Hyperloop inogona kuve inogona kushandiswa kutakura zvese zvinotakura vanhu uye vanhu. zvisinei, kunyangwe iyo enigmatic Elon Musk iri pamberi peiyi tekinoroji, dzimwe nyika kusagadzikana nezve Hyperloop uye kana zvichikosha kuisa mari. Zvakadaro, kufamba neiyi nzira nyowani yekufambisa iri padhuze pane izvo chaizvo sezvataitarisira, nezviyedzo uye kuvakwa kwemashubhu atove kuenderera kuCalifornia uye pamwe Europe munguva pfupi.
Hamburg to Copenhagen matikiti
Rotterdam kuenda kuHamburg matikiti
Iyi ndeyakananga kune vafambi vanofamba nemaoko, vanofarira kushanyira nzvimbo nyowani asi vanosarudza kuita izvozvo kubva mukunyaradza kwemisha yavo. Ipo VR yatove yatotengesa, munguva pfupi yakwana, tichaona kubatanidzwa pakati peVR, IR, uye AR, inotungamira kune chiitiko icho chiri pedyo neicho chaicho-hupenyu sezvinobvira. Kubva mukushanyira zvishamiso zvinomwe zvepasi rose kuenda mukutora dziva muGreat Barrier Reef, tekinoroji nyowani iyi ichabatsira vanhu kuona nyika sepasina kumbobvira yakaita.
Isu tichafara kukubatsira iwe kuwana dzakanakisa tikiti sarudzo dzinowanikwa. Raira tikiti rako rechitima ne Save A Train!
Unoda embed yedu Blog romukova “Remangwana Rekufamba” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffuture-of-travel%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Munyaya inotevera batanidzo, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- Link iyi nokuti Chirungu pakutengeserana kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kutsiva iyo pl kune fr kana nl uye nemitauro yakawanda yesarudzo yako.
I have been writing about finance, travel and tech for various publications for eight years now but my love for the niches themselves go back to childhood. i love all sorts of topics but none more so than the holy three of finance,travel and tech - Unogona baya pano ndibate